Task that are asked in Ms-Word practical Questions - PSC HELPER
Ms-Word मा सोधिने प्रश्नहरु
1. निवेदन, शुभकामना Type गरी Format मिलाउनु पर्ने .
2. Table create गरी Format मिलाउनु पर्ने .
3. Paragraph Type गरी Format मिलाउनु पर्ने .
Formatting मा सोधिने प्रश्नहरु
1. Margin Setting गर्नेु पर्ने :- Top, Bottom, left, right
2. Page Orientation गर्नेु पर्ने :- Portrait, Landscape
3. Text, Paragraph alighment गर्नेु पर्ने:- Left, right, center, justify
4. Indentation गर्नेु पर्ने:- Left, right
5. Text border, shading, single, double underline, text highlight colour, paragraph border मिलाउनु पर्ने ।
6. Paragraph Heading sytle मिलाउनु पर्ने ।
7. Image insert गर्नेु पर्ने ।
8. Header, footer, footnote, endnote, page number insert गरी formatting गर्नेु पर्ने ।
9. Excel sheet insert गरी Calculation गर्नेु पर्ने ।
10. Document लाई दिइएको password बाट Save गर्नेु पर्ने ।
11. Paper को] size मिलाउनु पर्ने दिएको अनुसारM जस्तै M A4, A3, etc.
12. Header or Footer मा file location add गर्नेु पर्ने ।